mardi, 15 mars 2016 20:06
Zaza tsy hita 5 taona : Efa voatsangan’ny Karana ao Antsirabe
Zazalahy efa ho 5 taona no tsy hita, ary efa 10 taona izy amin’izao fotoana vao hitan’ny ray aman-dreniny tamin’ny fomba tsy nampoizina tao Antsirabe androany. Efa natsangan’ny teratany karana ho zanany anefa ilay zazalahy ary dia raikitra ny ady eny amin’ny Fitsarana amin’izao fotoana.
lundi, 14 mars 2016 14:58
Photo: Sary nomena
Hafa kely ny hetsika nakalazana ny Taombaovao Malagasy teto an-jaridaina Faliarivo - Royal Park, satria nomena lanja manokana ny kolontsaina sy ny fitandrovana ny teny malagasy tao anatin'ity SEHO SEHATRA ity. Kabary, dihy, Antsa tononkalo ary fifampizaràna ny nofon-kena mitam-pihavanana no natao teto mba hifanojo amin’ny soatoavina Malagasy mitory fifankatiavana sy fihavanana.
samedi, 12 mars 2016 22:17
Ambotrosy – Farahalana : Tovolahy marary saina namono nahafaty ny rainy
Tovolahy iray manodidina ny 30 taona namono ny rainy niteraka azy raha vao iny niaraka nivoaka avy tao am-piangonana iny omaly maraina tao Ambotrosy, Kaominina Farahalana, Distrikan’i Sambava. Raha ny vaovao voaray avy tamin’ny mpitandro ny filaminana dia marary saina ilay tovolahy ary efa ela no nitaizana azy ara-pivavahana tany amin’ny toby Andranomadio. Ka ny toromarika nomena ny fianakaviany dia mila entina any ampiangonana isan’andro ilay tovolahy, dia izao izy nentin-drainy namonjy fotoam-bavaka maraina izao, saingy nihetsika ary nivadika biby namono nahafaty teo noho eo ny rainy. Tonga tany ny zandary avy any Farahalana omaly nisambotra ary nanao fanadihadiana momba ity tranga ity.